Markab ku degay xeebta dalka Papua New Guinea – Radio Daljir
Markab ku degay xeebta dalka Papua New Guinea
Port Moresby,Feb 2 -Markab rakaab ah oo siday illaa 300 qof ayaa la sheegay in uu ku degay xeebta waqooyi ee dalka Papua New Guinea, sida ay xaqiijiyeen saraakiil.
Sarkaal u hadlay Papua New Guinea ayaa warbaahinta u sheegay in la soo badbaadiyey 28 qof oo rakaabka ka tirsanaa ,waxana uu intaa ku daray in ay socdaan hawlo xoogan oo lagu doonayo in lagu badbaadiyo rakaabka kale ee markabku la degay,iyadoo ay hawsha samata-bixinta ay wadaan 4 doonyood .
Markabka MV Rabaul Queen ee degay , oo u shaqaynayey shirkadda reer Papua New Guinea ee lagu magcaabo Star Ships ayaa u kala safrayey magaalooyinka Kimbe iyo Lae ee dalkaasi.
Captain Nurur Rahman, oo madax ka ah wakaaladda badbaadada ee qaranka ee Papua New Guinea ayaa sheegaya in markabku markii uu degayey uu fariimo soo diray, waxana uu intaa ku daray in ay jiraan warar sheegaya in rakaabkii ay ku dabaalanayaan jaakadaha dabaasha ee loogu talagalay in lagu badbaado.
Reysalwasaraha dalkaasi Papua New Guinea Julia Gillard ayaa weriyayaasha u sheegay in dalka Australia uu ka caawinayo hawlaha badbaadinta.
Afhayeen u hadlay shirkadda uu markabkani u shaqaynayey ee Star Ships ayaa wakaaladadd wararka ee dalka faransiiska ee AFP u sheegay in cimiladda oo xun ay u malaynayaan in ay sababtay in markabku uu dego.
Shirkadda Star Ships ayaa ah shirkadda ugu weyn dhinaca maraakiibta ee dalkaasi Papua New Guinea.